शाहरुखसँग रोमान्स गर्ने कटरिना कि दीपिका ? – NamoBuddha Khabar
शाहरुखसँग रोमान्स गर्ने कटरिना कि दीपिका ?
बिहिबार, बैशाख २१, २०६९ | ७:२८:५५ |
बलिउडमा शाहरुख खानसँग रोमान्स गर्नका लागि दुइ नायिकाबीच रस्साकस्सी नै भएको छ । घरबारे भैसकेका किंग खानसँग रोमान्स गर्न को-को नायिका स्पर्धामा उत्रिए होलान् ? भन्ने जिज्ञासा सबैमा उठ्नसक्छ । कतिपयले यसरी भिडन्त गर्ने दूइ जनामध्ये एक जना पि्रयंका चोपडा नै हुन् भन्ने अनुमान गर्लान् । तर यी अनुमान सही भने होइनन् ।
शाहरुख खानसँग रियल लाइफमा नभएर पर्दामा रोमान्स गर्नका लागि दुइ नायिकाबीच स्पर्धा भएको हो । यसरी रस्साकस्सी गर्ने नायिकामा पि्रयंका चोपडा भने होइनन् । खासमा कटरिना कैफ र दीपिका पादुकोणबीच रोहित शेट्टीको नयाँ फिल्ममा अभिनय गर्ने विषयमा स्पर्धा चलेको हो । यो फिल्ममा नायकको रुपमा शाहरुख देखा पर्नेछन् भने नायिकामा दीपिका र कटरिनामध्ये एक जना हुनेछिन् ।
दुइ हिरोइनमध्ये कसलाई रोज्ने भन्नेमा निर्माता शेट्टी आफै दोधारमा छन् । आउँदो अगष्टदेखि फिल्मको शुटिङ सुरु हुने बताइएको छ । केही श्रोतले भने उक्त फिल्ममा दीपिकालाई पछि पार्दै कटरिनाले चान्स पाइसकेको बताएका छन् भने कतिपयले उक्त फिल्म दीपिकाकै हातमा पर्ने अनुमान गरेका छन् । कटरिना कैफले अर्को फिल्मका लागि साइन गरिसकेकाले पनि दीपिकाको भाग्य चम्किने बताइएको छ ।